Ndepụta maka Iwu na ire Ahịa Ngwa Gị | Martech Zone
Ndị na-eji ngwa ngwa mkpanaka na-arụ ọrụ miri emi, gụọ ọtụtụ isiokwu, gee pọdkastị, lelee vidiyo, ma soro ndị ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. Ọ dịghị mfe ịzụlite ahụmịhe mkpanaka na-arụ ọrụ!
Nkọwa 10-Nzọụkwụ iji wuo & Marketzụ ahịa Ngwa Na-aga nke Ọma na-akọwa usoro omume dị mkpa - nzọụkwụ site na ntinye ngwa ịmalite - iji nyere ngwa ọdịnala iru ogo ha niile. Na-eje ozi dị ka ihe nlereanya azụmahịa maka ndị mmepe na ndị nwere olileanya ihe okike, ihe ọmụma ahụ bụ ihe ndetu ntọala na nlele arụmọrụ yana ndụmọdụ maka ọganiihu.
Ndepụta Ngwa Ngwa Ngwa gụnyere:
Atụmatụ Ngwa Ngwa - aha, ikpo okwu na otu ịchọrọ isi nweta ya.
Nnyocha Asọmpi - onye nọ ebe ahụ, gịnị ka ha na-eme ma ọ bụghị ime nke nwere ike ịkọwa ọdịiche nke ngwa mkpanaka gị?
Mbido weebụsaịtị - Ebee ka ị ga-akwalite ngwa ahụ, tinye bọtịnụ maka ndị ọrụ mkpanaka, ma ọ bụ tinye ozi meta nke gosipụtara ngwa gị?
Iwuli gị App - kedu ka ị ga - esi bulie imewe maka onye ọrụ na ngwaọrụ ma jikọta ya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Nnwale Ngwaọrụ Ngwa - hapụ ụdị beta site na ngwa ọrụ dịka Ọnọdụ nnwale iji chọpụta chinchi, rịọ nzaghachi, ma lelee ojiji nke ngwa gị.
Ngwa ụlọ ahịa ngwa - nseta ihuenyo na ọdịnaya ị nyere na ụlọ ahịa ngwa nwere ike ime nnukwu ọdịiche na ma ndị mmadụ ibudata ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Azụmaahịa Ahịa - Kedu vidiyo, trailers, ihe oyiyi na infographics ị nwere ike kesaa na-akwalite ngwa mkpanaka gị?
Ọrụ Social Media - Eleghị anya m gaara akpọ nkwalite a ma jikọta ya na ndị okike, mana ịkwesiri ịkekọrịta ngwa ahụ ngwa ngwa na mmekọrịta mmadụ na ibe… ebe ị ga-eburu ọtụtụ ndị ọrụ.
Ihe ntanetị - Pịa tọhapụrụ, nseta ihuenyo, profaịlụ ụlọ ọrụ na ndepụta ezubere iche nke saịtị iji gwa gị na ngwa gị eruola!
Ego ahia - had nwere a mmefu ego… ihe bụ ahịa mmefu ego gị ngwa?
Nke a bụ nnukwu ndebanye mana usoro abụọ CRUCIAL na-efu:
Nyocha Nyocha - icchọpụta nyocha site na ndị ọrụ mkpanaka gị anaghị arụ ọrụ ga - enyere gị aka ịkwalite ma melite ụdị ngwa gị na - esote, ọ ga - agbakwụnye nnukwu ngwa gaa ọkwa nke ngwa ngwa ekwentị
Ọrụ arụmọrụ - Nlekota oru nke ngwa gi site na Ngwa Annie, SensorTower, ma ọ bụ Ngwa iji nyochaa ogo gị, asọmpi, ego, na nyocha dị mkpa iji melite arụmọrụ ekwentị gị.
Tags: ngwa anniengwaMee ngwa mkpanakanyochaahịa ngwa ngwamobile ngwabọtịnụ ngwa mkpanakandakọrịta ngwa mkpanaakanyocha mkpanaka ngwa nyochaimewe ngwa ngwa ngwammefu ego nke mkpanaka mkpanakamonetization ngwa ngwamobile ngwa n'elu ikpo okwungwa mkpanaaka pịa ngwangwa mkpanaaka sdkmobile ngwa na-elekọta mmadụ mwekotanjikarịcha ngwa ekwentị mkpanaakapeeji nke ngwa ngwa ngwa mkpanakaatụmatụ ekwentị mkpanaakannwale ngwa mkpanaka ngwa ngwaihe mmetutaule